Articles Local Elections | Hamro Patro
ब्लग - साहित्य/ चुनाव २०७४
- Dec 23 2017
सरसरी हेर्दा ४ र ६ नंबर प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशहरु राजधानी बिवादमा तानिएका देखिन्छन् । ४ नंबरको पोखरामा र ६ नंबरको सुर्खेत बिरेन्द्रनगरमा बनाउने कुरा मोटोमोटी सहमती भइसकेको छ भने अन्य प्रदेशहरुमा राजधानी बिवाद र आन्दोलनले जनजीवननै प्रभावीत गरेको छ । एकै दलका बिभिन्न नेताहरु पनि प्रदेशको छनौटमा फरक फरक मत अाि अभिब्यक्तिका साथ प्रस्तुत हुन थालेकाले बिषयलाई झनै गम्भीर बनाएको छ ।
Suyog Dhakal - Dec 17 2017
नेपाली कांग्रेस चिप्लीनका ५ कारणहरु
एउटा कुरा भने तय छ , कि अको ५ बर्ष बहुमत नल्याउने कुनै पनि पार्टीहरु संसदमा बिपक्षीका रुपमा रहनेछन् र सत्ताको स्वाद नचाखि अर्को चुनावका लागि सत्तामा आउने तयारी गर्नेछन् । अब त्यतीन्जेल सम्मका लागि पार्टीलाई कसरी पूर्नसंरचना गर्ने भन्ने बिषयचाँही बहुत बिषयगत अनि बस्तुगत छ । राजनितीशास्त्रमा गरिएका अध्ययन अनि लेखनका आधारमा केही इतिहास र उदहारणहरु जोडेर हामीले काग्रेस कमजोर हुनका केही कारणहरु लिएर आएका छौं । यी कारणहरुमा कांग्रेस मात्र नभई अन्य पार्टीहरुमा पनि लागु हुनसक्नेछ ।
- Dec 12 2017
आएका सबै राम्रा नहुन पनि सक्छन अनि गएका सबै नराम्रा नहुन पनि सक्छन् । तर यहाँ केही यस्ता आशालाग्दा अनि हार्लान भनेर कल्पना पनि नगरिएका नामहरु प्रस्तुत गर्न चाह्यौं, हिरो नेताहरुको लिष्टमा । यि हिरो नेताहरुले जनताको भावना बुझ्न या सम्बोधन गर्न नसकेको त पक्कै हो ।
कम्यूनीष्ट सरकारमा के हुन्छ ?
कम्यूनीजमलाई सामान्य अर्थमा समाजका हरेक एकाईले श्रमको बरावर फल पाउने संयन्त्रका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । तल्लो आर्थिक अवस्थाका वर्गहरुलाई कम्यूनीजम राम्रो मानिन्छ त्यसैले नै होला बिश्वका गरिब, भ्रष्ट, बेरोजगारी अनि अव्यबस्थित देशहरुमा कम्यूनीष्टहरुको बोलवाला रहेको पाइन्छ । कम्यूनीजम मा उत्पादका हरेक श्रोतहरु जस्तै जमिन, जनशक्ति, पूजीं लगायत प्रविधी अनि प्राकृतीक सम्पदाहरु पनि राज्यको अधिनमा रहन्छ ।
राम्रा मान्छेहरु आएका छन्, चाहे जसनसुकै पार्टीबाट होस् । राम्रो गरुन, देश र जनताको साथ रहनेछ । यसपाला नेपाललाई पार्टी हैन बिकास चाहीएको छ । यस अघिका बिकास भाषण र अन्र्तवातामा मात्र सुनेका नेपालीको कान पाकेको छ, आँखा बिकास हेर्न र समृद्धि हेर्न छटपटाइरहेका छन् ।
- Dec 09 2017
केवल ८०० मतको अन्तरले रविन्द्रलाई प्रकाश मान सिंहले उछिनेका हुन् । एउटा कुरा भने प्रष्ट छ, काठमाडौ क्षेत्र नंबर १ लाई प्रतिनीधी क्षेत्र मान्ने हो भने अब काठमाडौले नयाँ नेतृत्व खोजिरहेको प्रष्ट हुन्छ । पुस्तैनी राजनिती र बिरासतका मतहरु बिच दशकौं देखि काठमाडौमा भएको प्रकाशमान सिंहको पक्कड लाई केवल ८०० मतले मात्रै उछिन्न नसक्नु रविन्द्रको सापेक्षिक बिजय मान्न सकिन्छ ।
Suyog Dhakal - Dec 08 2017
चुनावको आर्थिक साइडएफेक्ट
बिसं २०४८ मा निर्वाचन आयोगले ११ करोड रुपैया अर्ब गरेको थियो भने यस बर्षको प्रतिनीधी तथा प्रादेशिक चुनाव सकाउन आयोगले लगभग १३ अर्ब रुपैया माग गरेको हो । यस खर्चमा सुरक्षा निकायले गर्ने खर्च समावेश भएको छैन जुन यस भन्दा धेरै मात्रामा खर्च हुन सक्दछ । पख्नुहोस् अझै २८ अर्बको कर्मचारी खर्च पनि त जोडिन बाँकी छ । अनि प्रश्न रहन्छ, अब चुनावपछि के राज्यले यस अघिको स्थानीय निर्वाचन, यस निर्वाचनको खर्च धान्दै संघीय र स्थानीय संरचना, सुबिधा अनि बिकास सम्मको व्यय धान्न सक्छ त ?
- Dec 07 2017
मतगणनाका क्रममा भएका धाँधली अझ भनौ मतपेटिकासम्म च्यातिने अराजक कार्य पनि भएको हो । प्रतिनीधी तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्थम चरण र दोश्रो चरण दुबै चरणका मतपेटिकाहरु राखेर एकैफेर मतगणना गर्ने योजना छ । यस हिसाबले आम नेपाली मतदाताले मत गणनाका बिषयमा बुझ्न अनि पादर्शिताको पैरवी गर्न झनै जरुरी छ ।
मतपत्र बदर हुने अवस्थाहरु (निर्वाचन सञ्चालन ऐनः २०४८ )
स्थानीय निकाय निर्वाचनमा मतपत्र बदरको सख्याँ अधिकतम नै थियो । कारण थियो एक मिटर भन्दा पनि लामा लामा मतपत्र अनि मतदाता शिक्षाको कमी, यसपालाको प्रतिनीधी तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा के हुन्छ हेर्न बाँकी छ ।
- Dec 05 2017
हुन त नेपाल को नेतृत्वको बिभिदता बहुतै उदेक लाग्दो छ, कक्षा १० मुनीदेखि पिएचडी गरेका सम्म धेरै नेतृत्व सिंहदरबारले देखेको छ, अब चुनावको यो संघार अघि र पछि नेतृत्वको चिरफार अनि गुण हामीले जान्न जरुरी छ । आउनुहोस बिश्वभरिका सर्वोत्तम राज नेताहरुको गुणलाई बिष्लेषण गरेर तयार गरिएको उत्कृष्ट नेतृत्वका ५ गुणहरुका बारेमा चर्चा गरौं । यस आलेख बेलीफीट नामक अग्रेजी पत्रिकाले निकालेको नेतृत्व संसमरण बिशेष बाट साभार गरिएको हो ।
बाटोको एउटा खाल्डो ले गर्ने हानी
हिसाब नै गर्ने हो भने पनि खाल्डाहरु बाटामा नहुने बित्तिकै यहाँ गाडीको बिग्रने दर, ईन्धनको बचत, यात्रीको स्वास्थ, दुर्घटनाको दर अनि समयमा कार्यलय या गन्तव्य पुग्ने यात्रीहरुको समयको मुल्यको व्यापक बचत हुने देखिन्छ । देशलाई स्वीजरल्यान्ड बनाउछु भन्दै सिंगापुरको सपना देखाउने नेतृत्वहरुले घरै अगाडीको बाटो पुर्न नसकेपछि अबको चुनावमा मतदाताहरु ले चनाखो भएर नेतृत्व छान्न जरुरी देखिन्छ ।
मलाई चुनावले अत्यन्त उत्साहित बनाँउदछ, इन्टरनेटमा गएर हरेक उम्मेदवारको बारेमा अनि पार्टीहरुका बारेमा जानकारी लिनेगर्दछु । चियापसलहरुमा कुरा सुन्न पनि झनै मज्जा आउदछ, अरु बेला भन्दा चुनावको बेलामा म अत्यन्त फरक हिसाबले संसारलाई चियाउने प्रयास गर्दछु । यस चुनावमा मैले धेरै कुराहरु बुझने प्रयास गरे, मैले समाजवाद अनि पंूजीबादका बारेमा पढें । कम्यूनिष्टहरुको इतिहास पढे अनि यि सबै अध्ययनहरु लाई नेपाली दलहरु संग जोडघटाउ गरेर पनि हेरे।
कसरी बन्छ प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा अनि राष्ट्रिय सभासम्म ?
छोटकरीमा प्रदेश अन्तर्गतको व्यबस्थापिकालाई प्रदेश सभा भनेर बुझ्न सकिन्छ । एकै व्यक्ति एक भन्दा बढि निर्वाचन क्षेत्रवाट उम्मेदवार हुन नपाउने यस प्रदेश सभाको चुनावमा प्रदेश भित्र बसोवास थर्ने नेपाली नागरीकलाई कानुन बमोजिम कुनै एक तोकीएको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र मतदान गर्ने अधिकार हुन्छ । यसक्रममा कुल प्रदेश सभा सदस्यहरुमा ४० प्रतिशत भनें समानुपातिक पद्धतीवाट चुनिन्छन् ।
पञ्चायत र बहुदलको संसदिय स्वरुप
बिसं २०१५ मा १८ बर्ष पुगेका बालिग मतदाताहरु अहिले ८७ बर्ष हाराहारीमा छन् । कुल ४२ प्रतिशत भोट हालिएको भनिएको यस निर्वाचनमा १०९ सिट मध्य नेपाली काग्रेसले ७४ सिट जितेको थियो । सुस्तरि प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेको नेपालमा २०१७ सालको निरकुंश व्यबस्थाले संसदिय संरचना नै भताभुगं पारिदियो । त्यसपछि नेपालमा प्रजातन्त्र फेरि बादल भित्र लुकेको पाइन्छ, राजसंस्था ले टाउको उठाएर पञ्चायति शासन व्यबस्था लामै समय नेपालमा चलेको हो ।
त्यसबखत पद्धम शमसेरले काठमाडौ म्यूनिसिपालीटीको सभापतीका लागि निर्वाचन गराएका हुन् । स्मरण रहोस त्यस चुनावमा महिलाहरु लाई मत खसाउने अधिकार दिइएको भने थिएन् । नेपालको निर्वाचन इतिहासमा बिसं २०१० सालमा मात्र महिलाले भोट हाल्ने अधिकार पाएका हुन् । २१ बर्षका पुरुष ले मात्र मत खसाउने अधिकार दिइएको उक्त निर्वाचनमा ६५ भन्दा धेरै प्रतिशत मत खसेको अनुमान गरिएको थियो । गेहेन्द्र शमसेर काठमाडौका म्यूनिसिपालीटीका प्रथम सभापती घोषणा भएका हुन् ।
वीरगंजलाई स्थानीय निर्वाचनको अन्य शहरहरूभन्दा अझ बढी खाँचो छ। अन्य शहरहरूभन्दा आर्थिक विकासका अत्यधिक सम्भावना बोकेको यो शहरलाई आर्थिक प्रगतिको पथमा द्रुततर गतिमा दौडाउन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुनाले यो शहरलाई स्थानीय निर्वाचनको बढी खाँचो भएको हो। र यो तथ्य सबैभन्दा बढी वीरगंज र यस वरपरका बासिन्दाहरूले बुझ्नुपर्ने हो।
- Jul 07 2017
कहाँ पुग्यो त , धरानको मतगणना
मतगणना चलिरहेको छ, निरन्तर । दोश्रो चरणको निर्वाचनको मतगणनाका क्रममा कहिकतै केही गणना विवाद या असमझदारीपूर्ण परिस्थिती उत्पन्न नभएको हैन् । बिशेष गरि अघिल्लो चरणको चुनावमा भरतपुर काण्डबाट केही निराशा हामीमध्य धेरैलाई लागेको छ ।
केही अचम्मका घटनाहरु पनि यस चुनावमा भएका छन्, आउनुहोस् थोरै प्रकाश पार्दछौं । सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाविस वडा नम्बर ६ मा पर्ने तिङ्लावासीले मतदानलाई बहिष्कार गरेका छन् । मतदान अगाडि पनि सोलुखुम्बु तिङ्ला गाँउका बासिन्दाले आफ्नो ठाँउलाई नेचा सल्यानमा गाभ्ने निर्णय विरुद्ध मतदान नगर्ने जनाएका थिए ।
- Jun 29 2017
बिराटनगर अनि ढिलो भएको मतगणना
काठमाडौबाट ३९९ किलोमिटर पूर्व औधोगिक नगरी बिराटनगरको क्षेत्रफल १०३ दशमलव ८८ किमी स्क्वायर रहेको छ । सन् २०११ को जनगणना अनुसार नेपालको काठमाण्डौपछिको दोश्रो ठुलो जनसंख्याभएको शहर बिराटनगर हो । यसै वर्ष पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएसंगै २०१७ मे महिनाको २२ तारिखमा बिरगञ्ज सहित बिराटनगरलाई पनि महानगरपालिका घोषणा गरिएको हो ।
मतपत्र बदर हुने अवस्थाहरु
मतपत्र बदर हुने कारण र अवस्थाहरु धेरै हुनसक्दछन तर धेरै सख्याँमा मतपत्र बदर हुनु प्रजातन्त्र अनि नागरीक अधिकारमाथिको प्रश्न चिह्न पनि हो । स्थानीय निकाय निर्वाचन भाग १, बैशाख ३१ मा भएको चुनावमा मतपत्र बदरको सख्याँ अधिकतम नै थियो ।
आउनुहोस् आज हामी यसै पेरिफेरिमा केहि जानकारी राख्छाैं, निर्वाचन सञ्चालन ऐन २०४८ अनुरुप अहिलेको निर्वाचन र तिनका कार्यब्यबस्था निर्धारित छन् । यसै अनुरुप एउटा जानकारी यहाँलार्इ हामी दिन चाहन्छौः जनताले अाफ्नो विश्वास र विकाशको मानक मानेर मतपेटिकामा खसालेको मतको मतगणनाजस्तो महत्वपूर्ण प्रक्रियामा को को ब्यक्तिहरु सामेल हुन पाउँदछन् ?
Bishwa Raj Adhikari - Jun 19 2017
स्थानीय निर्वाचन: आर्थिक विकासको सुअवसर
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले असार १४ गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको चुनावमा भाग नलिने र उक्त चुनाव सम्पन्न पनि हुन नदिने भनी लिएको निर्णयले मधेसको आर्थिक विकास अवरुद्ध मात्र हुने छैन, यस क्षेत्रमा अस्थिरता पनि बढेर जानेछ। त्यसकारण स्थानीय चुनावप्रति राजपाले राखेको यस किसिमको अदूरदर्शी एवं अव्यावहारिक सोच सर्वथा गलत छ।
Suyog Dhakal - Jun 01 2017
काठमाडौका मेयरको प्रथम कदम
कार्यभार सम्हाले लगत्तै जून १ तारिखका दिन क्लीन द सिटीको अवधारणा ल्याएका छन् । वास्तवमै बल्खुवाट बुढानिलकण्ठ पुग्दा धुलोले नाकनक्शा बिगार्ने यस शहरमा बोकेको पानी र मास्क भित्रको हावाले सबैको आँत बिगारेको छ । स्वच्छ शहर अवधारणा स्वागतयोग्य छ ।
यो आलेख तयार पार्दासम्म पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन समाप्त भइसकेको छ। केहीबाहेक, धेरैजसो स्थानमा कुन दलको कुन उम्मेदवार विजयी भयो भन्ने घोषणा पनि भइसकेको छ। स्थानीय निर्वाचन भए पनि, केन्द्रीय वा संसदीय निर्वाचनझैं सम्पन्न भएको यो निर्वाचनमा केवल राजनीतिले बढी महत्व पाएको र स्थानीय आर्थिक मुद्दाहरू ओझलमा पर्न गएको दुःखद यथार्थ दोहोर्याउनुपर्ला जस्तो लाग्दैन।
- May 28 2017
कामनपा मेयरमा विद्यासुन्दर, उप-मेयरमा हरिप्रभा बिजयी
१४ दिनको सम्पूर्ण देशबासिहरुकै लामो प्रतिक्षाको अन्त्य गर्दै निर्वाचन आयोगले आज एकाबिहानै मतगणना सकाएर बिजयी मेयरलाई जानकारी गराइसकेका थिए तर बिजयीहरुको उपस्थिति ढिला भएको हुदा आधिकारिक घोषणा गर्न भने समय लागेको आयोगले जानकारी दियो ।
Suyog Dhakal - May 22 2017
चियापसल, चुनाव र चौहत्तर साल
२० वर्ष अगाडी गाँउमा माटो र फुसका छाना भएका गाँउ थिए तर बैदेशिक रोजगारीको शुरुवात सँगै गाँउमा क्रमश पक्काका घर, हातहातमा बडेमानका मोवाईल, मोटरसाईकलको ताँती देखिन थालेका छन् । विकास पक्कै पनि राम्रो हो तर यसका साथै पुरुष जति धेरैजसो विदेश जान थालेपछी गाँउमा देखिएको सामाजिक विखण्डन, अराजकता, पारिवारिक र लैगिंक असन्तुलनको कुराहरुपनि २० वर्षयता धेरै वढेका छन् ।
स्थानीय चुनावमा हामीले चुनेका उम्मेदवारहरुमा कसको तलब कती ?
यि जनप्रतिनीधीहरु हामीहरुलाई चाहिएका बेलामा कार्यलयमा उपस्थित हुन, जनसरोकारका कुराहरुलाई सम्बोधन गर्न र विकासका क्रियाकलापहरु निष्पक्ष र पारदर्र्शी रुपमा गर्नकालागी खटीन जरुरी छ है । आउनुहोस एकफेर हेरौ न , कस कसका लागी के छ प्रावधान भन्ने विषय?
Suyog Dhakal - May 18 2017
निर्वाचन आयोगलाई सोध्नैपर्ने पाँच प्रश्नहरु
एक मिटरभन्दा लामा मतपत्रहरु कत्तिका मतदातामैत्रि थिए त ? हो हाम्रा दलहरुका संख्या धेरै छन् रातारात दर यति धेरै भएका हैनन, चुनाव हुने भएपछि दलहरू सहभागी हुन्छन् वैकल्पिक उपायहरूमा अध्ययन गर्नुपर्ने बाटै बन्द भएको हो ? ती दलहरुको चुनाव चिह्न सहितको मतपत्रलाई सरल बनाउने काममा निर्वाचन आयोग कत्तिको सफल भएको छ त ?
४९ र ५१ प्रतिशतबिचको फरकः स्थानीय चुनाव विशेष
संविधानका धाराहरु त लेखिएनन्, स्पष्ट बहुमत नभएपछि गठबन्धनका सरकारहरु पटक पटक परिवर्तन हुँदै गए । मुल कठिनाई भयो संघीय संरचनाको, के आधारमा देशलाई पूर्नसंरचना तर्फ लिएर जाने ?
मतगणना ढिला भएकोमा निर्वाचन आयोगको अनुरोध
देशभरका केही ठाउँहरुमा मतपरिणाम आइसकेर बिजयीहरुले खुसियाली मनाएको तस्वीरहरु हामीले सामाजिक संजालमा देख्न थालेका छौ भने अर्कोतिर सामाजिक संजालमै थुप्रै ठाउँहरुमा मतगणना निक्कै सुस्त गतिमा भएको हुदा ट्रोल निकाल्न थालिसकिएको छ ।
यस पटकको निर्वाचनले मतदातालार्इ नयाँ राजनीतिक अभ्यासको समेत स्वाद चखायो, त्यो हो "राजनीतिक गठबन्धन" । दुर्इ दल मिलेर जनतासामू मतमार्फत् एउटै भोट माग्ने यो अभ्यासमा नेपाली राजनीतिको उतिसाह्रो अनुभव छैन । एतिहासिक रूपमा घोषणा भएका केहि गठबन्धन राजनीतिक चिन्तनको रूपमा भने अचम्मै मान्नुपर्छ, काँग्रेस - माअोवादी केन्द्रको गठबन्धन, नयाँशक्ति - संघिय समाजवादी फोरम नेपाल तथा अन्त्यमा नेकपा एमाले - राप्रपा नेपाल गठबन्धन ।
Suyog Dhakal - May 15 2017
प्रत्यावाहनः Right to Recall
राईट टु रिकल भन्नाले प्रत्यावहन अर्थात एकफेर चुनिएर गएका उम्मेदवारहरुलाई पूनः फिर्ता बोलाउन सक्ने जनताको शक्ति भन्ने बुझाँउदछ । भारतमा प्रस्ताव गरिएको यो प्रावधानमा मतदानवाट चुनेर पठाएका प्रतिनीधीहरु जोसुकै भएपनि जनताको वहुमतले निर्णय गरेमा फिर्ता वोलाउने अधिकार भन्ने बुझिन्छ । यसप्रकारको प्रावधानले प्रजातान्त्रीक अभ्यासलाई अझ वलियो बनाँउदै जनप्रतिनीधीहरु जवाफदेही वनाउने विश्वाश गरिन्छ ।
कहाँ कसले जित्ला ? चारवटा महानगरका अड्कलबाजी
काग्रेस र माओबादीको काठमाडौ र चितवनमा भएको समिकरणलाई आआफ्नै हिसाबमा श्याख्या गरिएको छ र सम्पूर्ण कुराका परिणामहरु अब छिटै हामीलाई थाहा हुनेछ । काठमाडौ वरिपरिका स्थानहरु टोखा, चन्द्रागीरी, नार्गाजुन अनि शंखरापुर जस्ता ठाँउमा मतगणना शुरु भईसकेको छ ।
हिमाली जिल्ला मनाँङ्गवाट शुरु भयो मतपरिणाम
मनाँङ्गवाट यसपालाको स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामको खाता खोलिएको छ, हिमाली जिल्ला मनाङबाट नेपाली काँग्रेसले मत अग्रता हाँसिल गर्न सुरु गरेको छ। निर्वाचन अधिकृत श्याम सुन्दर अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार नेपाली काँग्रेसकी अनिता लामा र नेकपा एमालेका लोकेन्द्र बहादुर घलेको निकट प्रतिस्पर्धा रहेकोमा नपाली काँग्रेसकी अनिता लामा को विजय भएको छ ।
काठमाडौँ राष्ट्रिय सभागृह अगाडी मतगणना नभएको भनेर प्रदर्शन
काठमाडौँले आज २० वर्षपछि स्थानीय प्रतिनीधीलाई मतदान गरेको छ । मतपेटिकाहरु अहिले प्रदर्शनीमार्गको राष्ट्रिय सभागृहमा आईपुगेका छन् । प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले कर्मचारीहरुलाई केही समयको आराम र विश्रामकालागी भनेँर मतगणना भोलीवाट मात्र शुरु गर्ने वताउनुभएको छ । त्यहाँ सुरक्षा ब्यबस्था अत्यन्त कडा भएतापनि मतगणना तुरुन्त शुरु नहुँदा स्थानीयहरुले नारावाजी गर्न थालेको खबर छ ।
आजको मतदानको सारसंक्षेपः निर्वाचन आयोगको शब्द
आईतवार साँझ निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयूक्तले पत्रकार सम्मलेन गर्दै मतदान छिटपुट घटना वाहेक अन्य ठाँउमा सहज भएको जनाएका छन् । दोलखाको पवटीमा एकजनाको मृत्यू भएको वताँउदै निर्वाचन आयोगले अन्य ठाँउको शान्तीपूर्ण चुनाव र उत्साहपूर्वक सहभागीताकालागी सबैलाई धन्यवाद भनेको छ ।
नेपाली रंगकर्मीहरुको निर्वाचन
निर्वाचनको महाकुम्भले सबैलाई आआफ्नै हिसाबले छोएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत आआफ्ना कुराहरु अनि निर्वाचनका अनुभवहरु धेरैले राखेका छन् । कसैलाई निर्वाचनमा मतदान गरेकोमा खुशी छ भने कसैलाई चुनावमा मत खसाल्न नपाएको मा गुनासो । आउनुहोस कुरा गरौँ
भोट हाल्दा औलामा मात्र दाग लागोस् , स्वाभीमानमा हैन
३४ वटा जिल्लाका सचेत नेपाली नागरीकहरुले अमुल्य भोट हाल्दैहुनुहुन्छ, आगामी ५ वर्षकालागी स्थानीय प्रतिनीधीहरु हरुको निष्पक्ष चयन गर्नमा हाम्रो पात्रो तपाँईको मतका लागी साधुवाद ब्यक्त गर्न चाहन्छ । हामीमध्य कतिपय विदेशमा छौ या स्वदेशमै भएर पनि मतदाता नामावलीमा नाम नभएकाले मतदानको महाकुम्भमा सहभागी हुन पाएनौ होला ।
निर्वाचनमा गर्न नहुने कुराहरु
स्मरण रहोस गोप्य मतवाट बहुमत लिएर आएका उम्मेदवारमात्र चयन हुने हुन् । संविधान र कानुनले मतदानलाई गोप्य राख्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ र यसअर्थमा मतदाता स्वंले पनि आफूले दिईसकेको मत लाई सार्वजनिक गर्न पाईने छैन् ।
यसरी हुँदै छ स्थानीय निर्वाचन
सबैभन्दा धेरै प्राथमिक्ता दिएको लाईन भने गर्भवती, अशक्त, अपांगता भएका, बिरामी, जेष्ठ नागरीकका लागी भएको अलग्गै लाईन हो । यसका वाहेक पुरुष अनि महिलाका अलग अलग दुईटा लाईन रहेको छ । यसप्रकारले तिनवटा लाईन रहन्छन् है ।
फेसबुकले स्थानीय निर्वाचनको सन्देश दियोः तपाईले भोट हाल्नुभयो ?
अन्तराष्ट्रिय कम्पनी फेसबुक जस्ले विभिन्न समयमा अन्तराष्ट्रिय घटनाक्रमलाई आफ्ना प्रयोगकर्तासमक्ष विभिन्न तवरले एउटा आब्हान गर्ने गर्दछ । फ्रान्समा भएको बम बिष्फोट देखि नाईजेरियाका बालिका अपहरणका घटनासम्म अनि तेश्रो लिगींहरुको अधिकारका लागी झन् फेसबुक लागीपरेको हुन्छ ।
भोट कसरी हाल्ने ? स्थानीय निर्वाचन विशेष
अाज विहान ९ बजेदखि साँझको ५ बजेसम्म आआफ्नो स्थानीय तवरमा पूर्वनिर्धारित मतदान केन्द्रमा आफ्नो मतदाता परिचयपत्रकासाथ हामी पुग्नपर्नेछ । यसरी मतदानकालागि जाँदा घर परिवार अनि समूदायका अरुहरुलाई पनि राष्ट्र निर्माणको यो महान कार्यमा लैजान नभुलौं । यसरी मतदाता नामावलीमा यदी तपार्इको नाम छ भने मतदान केन्द्रमा जाँदा आफ्नो मतदाता परिचय पत्र बोकेर जान पर्दछ अथवा मतदाता परीचयपत्रमा
- May 10 2017
मेयर र उपमेयरसंग बहस - पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारहरूसँग बहस LIVE । अाज बेलुकी ६ देखि ८ बजेसम्म पोखरामा ।
सही उम्मेदवार छान्ने ७ चरणहरु, स्थानीय चुनाव विशेष
चुनाव अथवा निर्वाचनले जहिले पनि मतदाताहरुलाई महत्वपूर्ण विकल्पहरु प्रदान गर्दछ जसमध्य सर्वोत्तम नेतृत्व छान्ने जिम्मेवारी तपाईहामी सबैजना मतदाताहरुको हो । आउनुहोस् आज हाम्रो पात्रो मार्फत छलफल गरौँ, कसरी छान्ने त सही उम्मेदवार ?
- May 08 2017
स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुन उम्मेदवारले कतिसम्म खर्च गर्न पाउने?
निर्वाचन अाचारसंहिताः उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले निर्वाचन खर्चको लागि अलग्गै बैङ्क वा वित्तिय संस्थामा खाता खोली निर्वाचन सम्बन्धि सम्पूर्ण कारेबार उक्त खाताबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने र सो खाताबाट राजनीतिक दलको हकमा विधान बमोजिम र उम्मेदवारको हकमा उम्मेदवार अाफै वा निजको अाधिकारिक प्रतिनिधिद्वारा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
Suyog Dhakal - May 03 2017
यसरी आफ्नो नाम मतदाता नामावलीमा खोज्न सकिनेछ : स्थानिय निर्वाचन विशेष
निर्वाचन समबन्धी जानकारी अनि विचारहरुलाई सहजै तपाँईहामी माझ ल्याउन हाम्रो पात्रोको निर्वाचन विशेष श्रृखलामा तपाँईलाई स्वागत छ । बैशाख ३१ गते र जेष्ठ ३१ गते मध्य तपाँईको मत हाल्ने दिन कुन दिन पर्दछ ? यो कुरा पत्ता लगाउनकालागी तपाँई कुन प्रदेशमा पर्नुहुन्छ भन्ने थाहा पाउन जरुरी छ, है ।
गएको २० वर्षमा प्रथम पटक नेपाली स्थानिय गाँउहरुमा सबल नेतृत्व चयनकालागी ब्यालेट बक्सहरु पुग्दैछन् । यो २०७४ बैशाख ३१ मा हुने भनेको चुनावलाई सन् २०१५ मा घोषणा गरिएको संविधानको सस्थागत कदमकालागी अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
स्थानीय चुनावमा महिलाहरु किन हिच्किचाउने ?
स्थानीय चुनावको माहौल र चर्चा आजकाल देशभर नै कतै छुट्ने गर्दैन । ठाउँठाउँको उम्मेदवारहरुको नाम जनसमुदाय माझ निस्किन थालेपछि एक किसिमले राष्ट्रलार्इ नै चुनावले छोइसकेको अनुभूति हुन्छ । यस चुनावमा बिभिन्न पदमा महिला उम्मेदवारहरुले पनि सहभागिता देखाउन सकिने सरकारद्वारा ब्यस्बस्ता मिलाइएको छ ।